Nandinika ny iray amin'ireo tranokalanay izahay androany. Hiainga amin'ny fidirana mailaka atsy ho atsy izy ireo - zavatra tsara izany. Mieritreritra aho fa efa tafiditra anaty lisitra mainty ny tranokalan'izy ireo… izao no antony…
Manana taratasy fifandraisana amin'ny tranokalan'izy ireo izy ireo. Ampy tsara, saha maromaro handefasana ny mombamomba anao manokana amin'izy ireo hisoratra anarana amin'ny fandraisana andraikitra mailaka ataon'izy ireo. Raha jerena akaiky kokoa anefa dia fitaovana tena tsotra napetrak'izy ireo ho an'ny spammers izany.